Sweatshirts → Uwe ejiji • ọkachamara P&M kọmputa
Ntinye ngwa ngwa
MAKA ụlọ ọrụ
Sweatshirtsnri n’akụkụ ya eriri afọ i Uwebụ ihe bụ ntọala dịịrị ndị ọrụ n'ọtụtụ ọrụ. Modelsdị ụdị dị iche iche dị na nke anyị shop na-eme ka nhọrọ nke ngwaahịa dabere na nzube ya ma ọ bụ mmasị ndị ọrụ.
Sweatshirts maka ọrụ na kwa ụbọchị na eserese gị
A na-eji ụdị ndị a gosipụtara na-eji ihe dị elu, nke ọrụ ha bụ ihe kachasị mma maka mmegide ya na nchebe ya na ọnọdụ ihu igwe siri ike.
Sweatshirts bụ akụrụngwa bụ isi nke ndị nnọchi anya ọtụtụ ọrụ, gụnyere. ihe owuwu, mmeputa ma obu ngwa oru. Ha ji ihe ha bara uba mee ihe bara uru - ewezuga inye obi oku megide ikuku ma obu oyi, ha na-enyekwa ohere nnwere onwe imeghari karịa jaket, ebe ha na-echekwa uwe ndị mmadụ.
Anyị na-enye usoro maka oge niile dabara na ọnọdụ ihu igwe dị iche iche ma ọ bụ jumpers mgbanwe maka oge opupu ihe ubi ma ọ bụ oge mgbụsị akwụkwọ.
Anyị na-enye gị Jaketị ọrụ na ọnụahịa dị iche iche dabere na ihe nlereanya - site na isi ihe kachasị baa ọgaranya na nzube pụrụ iche.
A na-eme polyester ka ukwuu, nke na-enye ihe mkpuchi ka ukwuu na ikuku, ma nweekwa ọtụtụ nnwere onwe ịgagharị karịa kpochapụwo Jaketị ọrụ.
Na mgbakwunye, ọtụtụ ụdị nwere akwa mkpuchi maka mkpuchi mkpuchi na obere akpa ihe bara uru na zippers. Anyị na-enye sweatshirts na agba dị iche iche, yana uwe ogologo na mkpụmkpụ, yana agwa ịdọ aka na ntị ya na ihe eji agba agba.
Uwe nro Ọ ga - adabara ndị ọrụ okporo ụzọ, ndị na - arụ ihe owuwu ma ọ bụ ndị na - arụ ọrụ mgbe ọchịchịrị gasịrị.
Uwe elu ụlọ ọrụ dịka Reis ma ọ bụ Stedman Ejiri akwa na-eguzogide iji ya ike.
Iji chekwaa ihe ndị na-emebi emebi, a na-etinye ihe nchebe pụrụ iche n'ụdị ahọpụtara. Ọzọkwa, ejirila ụzọ dị iche iche maapụta ikike iji belata ịchafụ n'oge mmega ahụ siri ike.
Ọtụtụ n'ime ụdị nwere akwa dị mma na ukwu na nkwojiaka iji gbochie mmebi nke uwe onwe ma ọ bụ unyi.
Na ire ndị a: jaketị ajị anụ, jaket ọrụ, jaket polypropylene, jaket ịdọ aka ná ntị, swater.
Nhazi onwe onye maka ugwu ugwu
Ọtụtụ ndị ahịa nwere ekele maka ya aha mmadu ya na onwe ya, ọkachasị ma ọ bụrụ na ndị ọrụ na-arụ ọrụ na-anọchite anya ya na kọntaktị ndị nwere ike ibute ọrụ na ndị ahịa.
Uwe elu na ebipụta bụ ihe ndị ọzọ na-akpọkarị n'ihi na ọ bụ dakọtara nke ọnụ ala mgbasa ozi. N'iburu nke a n'uche, tụlee usoro akara akara dị elu nke na-eguzogide mbibi, ụcha agba na ịsacha elu ọkụ. Ọ bụ ya mere anyị ji akwado ya maka ịhazi onwe ya ihe mkpuchi kọmputa.
ọrụ sweatshirtsajị ụmụ nwoke na-arụ ọrụ sweatshirtsajị anụ jaịlJaketị ọrụAllegro ọrụ sweatshirtsuwe ọrụ na-acha ọchasweatshirts ụmụ nwanyịjaket denim ọrụengelbert strauss ọrụ jaketịjula ọrụ shirtsjaket ọrụ ụmụ nwokejaketị ọrụJaketị ọrụọrụ olxajị anụ na-acha aja ajaAllegro ajị anụ eji arụ ọrụsaịtị shirts arụ ọrụ: allegro.plsoftshell Jaketị ọrụJaketị isi awọjets na-arụ ọrụ na hunduọrụ sweatshirts na mbipụtaọrụ sweatshirts na mbipụta Allegrojaket ọrụ oyiuwe mgbokwasị ọrụjula ọrụ shirtsrụrụ sweatshirtssweatshirts na-arụ ọrụjaakị jakị ọrụsweatshirts ọrụ dị ọnụ alauwe sweatshirts
Ndị na-eme ya
Uwe nchedo (usoro)
Uzo di iche iche na elu
T-uwe elu / polo
Ngwa eji eji akwa
Ihe okpu na okpu agha
Jaketị / Vests
Ulo / uwe
Akwa na akwa mmiri
Uwe elu na-ahụ anya
n'ụlọ ahịa oyi
Freezer ogologo ọkpa
Igwe nju oyi
Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ
Ihe mkpuchi kọmputa
Ihe ịchọ mma
DTG obibi akwụkwọ
P&M Ikike niile echekwabara 2020
imewe na mmejuputa iwu: pixelsperfect.pl - Ebe nrụọrụ weebụ Poznań